WordPress: Etu esi edepụta akwụkwọ ụmụaka (Ihe kachasị ọhụrụ m) | Martech Zone
Anyị ewughachila usoro nke saịtị maka ọtụtụ ndị ahịa anyị na WordPress, otu n'ime ihe ndị anyị na-anwa ime bụ ịhazi ozi ahụ nke ọma. Iji mee nke a, anyị na-achọkarị ịmepụta peeji nnabata ma tinye menu na-akpaghị aka depụta peeji niile dị n'okpuru ya. Ndepụta nke ibe akwukwo, ma obu akwukwo. O di nwute, odighi oru ma obu njiri mara ime nke a n'ime WordPress, ya mere anyi weputara a WordPress Ndepụta Subpages shortcode igbakwunye na faili faili function.php isiokwu ndi ahịa.
Ojiji dị mfe:
Enweghị akwụkwọ peeji nke
akwara - Ọ bụrụ n’ịchọrọ itinye otu klaasị na ndepụta ndị a na - edozighi gị, webata ya ebe a.
ifem efu - Ọ bụrụ na enweghị akwụkwọ nwata, ị nwere ike itinye ederede. Nke a na-abịa kemfe ma ọ bụrụ na ọ bụ ndepụta nke ọrụ oghere… i nwere ike tinye “Ọ dịghị ugbu a oghere.”
content - Nke a bụ ọdịnaya egosiri tupu ndepụta edebeghị.
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ịchọrọ a obere okwu na-akọwa ibe ọ bụla, ngwa mgbakwunye na-enyere edemede aka na ibe ka ị nwee ike idezi ọdịnaya ahụ na ntọala peeji.
Emechara m ruo na ịmanye koodu ahụ n'ime ngwa mgbakwunye ka ọ dịrị m mfe ịwụnye ma jiri ya, yana Depụta Pmụaka Peeji nke Shortcode ngwa mgbakwunye e mma site WordPress taa! Biko budata ma wụnye ya - ọ bụrụ na-amasị gị ka ịnye nyocha!
Tags: Depụta nwa peejindepụta ndepụtapluginshortcodesWordPresswordpress plugin
FindThatLead Prospector: Chọọ ma Chọta Adreesị Adreesị Ezubere Iche